भगवान् शिवको नाममा सोमबार व्रत बस्ने चलन कसरी सुरु भयो ? यस्तो छ वास्त’विकता – Nepal Online Khabar
भगवान् शिवको नाममा सोमबार व्रत बस्ने चलन कसरी सुरु भयो ? यस्तो छ वास्त’विकता
April 27, 2021 176
उपवास वा व्रत, हिन्दुध’र्मालम्वीहरुले आफ्नो भाकलरप्रतिज्ञा पुरा गर्न गर्ने गर्दछन्। व्रत केवल शारिरीक स्वा’स्थ्यको दृष्टीबाट मात्र महत्वपुर्ण छैन। हप्ताका प्रत्ये’क दिन एक वा धेरै देवी देवताको लागि व्रत बस्ने प्रथा चलिआएको छ हिन्दु धर्ममा। यस्तैमा सो’मबार भने सामान्यतया शिवको लागि सम’र्पित छ।
सोमबारको व्रत सूर्य उदय’संगै सुरु हुन्छ अनि सूर्य अस्ताए पछि सकिन्छ। खाना बेलुका’को आरती सकिए’पछि खाइन्छ। दिनमा शिव र पार्वतीको पुजा तथा आरा’धना गरिन्छ। तर कुनै पनि पुजाको अगाडी गणेशको पुजा भने अनिवार्य नै छ।
अझ साउन महिनाको सो’मबारको व्रत फल’दायी मानिन्छ। यो विश्वास गरिन्छ की , सोमबारको उपवासले मानिसको इच्छा अनि आ’कंक्षा पुरा गर्दछ अनि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। अविवाहित स्त्रीले असल पति पाउँ भनि सो’मबार व्रत बस्ने चलन अझ बढी छ।
सोमबार व्रत बस्ने चलन क’सरी सुरु भयो ?सोमबार शिव’को व्रत बस्ने चलनको पछाडी धेरै कथा’हरु चलिआएका छन। यी कथाहरु मध्ये तीन कथाहरु बढी चर्चित छन्। पहिलो कथा एक गरिब ब्राह्म’णको बारेमा छ जसले शिवको व्रत पश्चात धन प्राप्त गरेको कथा छ।
दोस्रो, एक धनी व्यापा’रीको छ। जसको छोरा थिएनन्। लामो प्र’तिक्षा पछि छोरा जन्मिए तर छोटो समयमै मृत्यु हुन पुग्यो। कथा अनुसार शिव र पार्वतिको कृपाले छोराको पुर्नजन्म भएको थियो। तेस्रोः शिव र पार्वती’ले खेलेको कौडा खेलको कथा छ।
कुनै पनि खा’लको व्रत वा उपवासले शारीरिक स्वास्थ्यमा प्रतक्ष प्रभाव पार्छ। समय समय’मा व्रत बस्नाले शरिरलाइ फाइदा पुर्या’उँछ। व्रतको धारणा परापुर्व’ककालका ब्राह्मणहरुले ‘ब्राह्मण धर्म’
प्रति मानिसलाइ आकर्षित गर्न प्रयोग गर्थे। यसले शारिरीक स्वास्थ्य’लाई नै राम्रो बनाउने हुँदा व्रत गर्ने आफैले नै अनु’भव गर्नसक्ने हुँदा हजारौं वर्षसम्म पनि यो प्रथा चलिआ’एकै छ। ओएस नेपालबाट
Posted in धार्मिक
Prevदाङको कोरोना अस्पताल संक्रमितले भरिए, अक्सिजन अभाव
Nextरोनाल्डो म्यानचेस्टर फर्कने चर्चा
माओवादी केन्द्र बैठकः मन्त्रीहरुलाई आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्न निर्देशन
Good News : अब सरकारले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्ने…हेर्नुहोस् ! सक्दो सेयर गरौ ।
आवाजबिहिनहरुको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको मिडिया भन्दा सच्चा युट्युबरहरु अरबौं गुणा राम्रो हुन् :ज्वाला संग्रौला ,पढ्नुहोस !सहमत भए शेयर गर्नुहोस् ।
ओलिले प्रचण्डलाई भने -पार्टी निर्णय किन नमान्नु, भारतले भनेको पो मान्दिँन
विद्यालय, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गरिने ! (1641)